क्रेडिट रिलीज भनेको के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki क्रेडिट स्थानान्तरण
क्रेडिट कार्ड के हो?
तिनीहरूले एउटा नयाँ वाहन रोजेका छन् वा नयाँ घर निर्माण गरेका छन्। यस अवस्थामा, तपाईंले ऋण रेकर्ड गर्नुपर्छ। तपाईंले देख्नुहुनेछ कि एक क्रेडिट अब धेरै व्यक्तिहरूको लागि अन्तिम रिसोर्ट हो र तपाईं थप केहि लिन सक्नुहुन्न। त्यसैले यदि तपाईलाई अब ऋण चाहिन्छ र तपाईंको घरको बैंकमा लागु गर्नु पर्छ भने, यो कुनै समस्या छैन। यो यो क्रेडिट प्रयोग गर्न पनि राम्रो काम गर्दछ। क्रेडिट एक निश्चित सम्झौता संग छापिएको छ। तपाईं र बैंकबाट दुवै यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछ। क्रेडिट सम्झौताले अनुबंध सहित सबै सम्भावित अवस्था समावेश गर्दछ। तपाईं एकै समयमा एक योजना योजना देखाइने छ। तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि जम्मा जम्मा प्रगति कसरी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हुन सक्छ कि तपाईं आफैलाई क्रेडिट पुन: भुक्तान गर्न छिटो प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। जब तपाईं घर किन्नुहुन्छ, त्यो ऋण दशैं भन्दा पहिले लाग्दछ भन्दा पहिले ऋण लिन सकिन्छ। खैर, तपाईंले असाध्यै धेरै पैसा आउन सक्नुहुनेछ, र पहिले नै ऋण ट्रिगर गर्न सोच्नु भएको छ। त्यसपछि त्यसो हो क्रेडिट स्थानान्तरण, तथापि, यो क्रेडिट रिलीज यस तरिकामा गर्न सकिँदैन। तपाईं एक्स केवल बैंक खातामा राशि हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्न। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ पहिले आफ्नो बैंक सल्लाहकारसँग कुराकानीको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँका लागि तपाईलाई सूचित गरिनेछ कि क्रेडिट समयमै पहिले नै ट्रिगर हुन सक्छ।
एक क्रेडिट नोट प्रत्यक्ष रूपमा क्रेडिट को लागि कल मा छलफल गर्न सकिन्छ। तपाईंले पक्का ट्राफिकलाई सँभाल्नु निश्चित छ र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई सबै चाहानुहुन्छ। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, तपाईं कुनै पनि समय आफ्नो बैंकरसँग भेटघाट व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि यो सकेसम्म तपाईसँग ईमानदार छ। यो राम्रो हो यदि तपाईं सीधा क्रेडिट कार्ड उल्लेख गर्नुहुन्छ। यो कसरी बैंक सल्लाहकारले तपाईंलाई राम्रो प्रस्ताव तयार गर्न सक्छ र तपाईं नियुक्तिमा लामो प्रतीक्षा गर्न पर्दैन। यदि तपाई यसलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने एक क्रेडिट जाँच एक राम्रो कुरा हो। यद्यपि, तपाईलाई सही परिस्थितिमा पनि हेर्नुपर्छ।
तपाईलाई ध्यान दिनुपर्छ?
त्यसैले तपाईलाई निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ सबै केहि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले राम्रो सल्लाहकार पाउनुभयो भने तपाइँ हेर्न सक्नुहुनेछ। आज धेरै चीजहरू काम गर्दछ तर सम्भव भएमा सम्झौतामा क्रेडिट जाँच राख्नु पर्छ। यो प्रायः प्रयोग गरिन्छ जब कसैले नयाँ कार किन्न सक्छ। त्यसपछि यसले प्रायः एक क्रेडिट ब्रेक लिन्छ। प्रायजसो भागका लागि सवारीहरू पहिले नै वास्तविक भुक्तान गर्नु भन्दा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यो पनि एकदम राम्रो छ र चाहिएको छ। क्रेडिट सावधानी एक राम्रो साधन हो र यसैले एक ऋण मुक्त छिटो हुन सक्छ। तथापि, तपाईं शब्द भित्र क्रेडिट तिर्न राम्रो तरिकाले सल्लाह दिनु पर्छ। कुनै पनि अवस्थामा, बैंक सल्लाहकारसँग कुराकानी राम्रो छ। यो तपाईं अनावश्यक समस्याबाट टाढा हुनुहुन्छ। पैसा सजिलै संग बैंक खाता तिर्न गलत छ। तपाईलाई हुँदैन। तपाईं सुरक्षित हुनेछ जब तपाईं बैंक सल्लाहकार व्यक्तिगत रूपमा वा ई-मेलबाट सम्पर्क गर्नुहुनेछ। आज सुनको कुरा गर्दैछ। एक सबै मान्छे संग कुरा गर्न सक्छ र पनि क्रेडिट क्लियरिंग मा सहमत हुनेछ। त्यसैले ईमानदार हुनुहोस् र केवल तपाईंको भाग्यको प्रयास गर्नुहोस्। जब क्रेडिट पूरा भयो तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको सम्झौता हेर्नुहोस्।
अघिल्लो लेखनगद क्रेडिट
अर्को लेखक्रेडिट जोखिम